प्रम ओलीप्रति काँग्रेसको ‘नरम नीति’ : देउवाको रहस्यमय मौनता ! | Ratopati
प्रम ओलीप्रति काँग्रेसको ‘नरम नीति’ : देउवाको रहस्यमय मौनता !
personलोकेन्द्र भट्ट exploreकाठमाडौं access_timeबैशाख १९, २०७७ chat_bubble_outline0
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति नरम नीति अख्तियार गरेको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला प्रतिपक्षी काँग्रेसले भने नरम नीति लिएको हो ।
वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीति दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध आक्रमण देखिएका काँग्रेस अध्यादेश फिर्तापछि यूटर्न हुन पुग्यो ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलको नेतृत्व गर्दै सरकार विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा कस्सिएको काँग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजानीमा माग्न जाँगर देखाएन ।
नेकपामा ओली सबै निकायमा अल्पमतमा रहेको अड्कलबाजी भइरहेको बेला काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीले शासन सञ्चालनको वैधानिकता गुमाएको टिप्पणी गर्यो ।
तर, कानुनी मामिलाका जानकार समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले संसदमा बहुमत हुन्जेल प्रधानमन्त्रीले वैधता गुमाएको भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाएको भन्न सुझाए ।
सोही अनुसार पार्टी पदाधिकारीबीच भएको छलफलबाट तय भएका एजण्डा बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यससमिति बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेका थिए । जसमा १ दर्जन बढी नेताले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली र नियतमाथि गर्मागर्म बहस भयो थियो ।
केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ र प्रदीप पौडेलले बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्न र प्रतिपक्षी प्रस्तुति आक्रामक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, गगन थापालगायतले प्रधानमन्त्री चर्को आलोचना गरे पनि राजीनामा भाष्य प्रयोग गरेका थिएनन् ।
प्रदीप पौडेले रातोपाटीसँग भने, ‘नैतिक र राजनैतिक रुपमा केपी शर्मा ओली असफल र नालायक भनेर हामीले निष्कर्ष निकालेपछि उहाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहिरहन सक्नुहुन्न भनेर हामीले भन्न किन नसक्ने ? प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्ने क्रममा जुन शब्द हामीले प्रयोग गरेका छौं, त्यसको आधारमा त उहाँ प्रधानमन्त्रीका लागि लायक हुनुहुन्न भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसकारण राजीनामा किन नमाग्ने ?’
अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले पार्टीले सरकारप्रति नरम नीति लिएकोप्रति नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
करिब ६ घण्टा चलेको बैठकमा उठेको प्रश्नमा कुनै जवाफ नभएर सभापति शेरबहादुर देउवा पञ्छिए । बैठकमा सभापति देउवाले प्रष्टरुपमा पार्टीको धारणा राख्ने चेस्टा पनि गरेनन् । बुधबार देउवाले सबै केन्द्रीय सदस्यलाई धन्यवाद मात्र दिएर बैठकको समापन गरेका थिए ।
यद्यपि बैठकले ओलीको नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनैतिक एवं नैतिक आधार गुमाएको निष्कर्ष निकाल्यो ।
काँग्रेस बैठकको निर्णय थियो, ‘सरकारका क्रियाकलापले नेपाली जनताले विगतको निर्वाचनमार्फत प्रदान गरेको अभिमतको घोर उपेक्षा र अपमान गरेको छ । तसर्थ नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनैतिक एवं नैतिक आधार गुमाएको ठहर गर्दछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले बेमौसममा अध्यादेश ल्याएर मुलुकको जनमत नै विभाजित गरिदिएपछि चौतर्फी आलोचना छ । जसकारण कोरोना भाइरसविरुद्धको संघर्षमा लड्नुपर्ने बेलामा पार्टीभित्रैबाट उनीविरुद्ध गम्भीर अविश्वास पैदा भयो ।
यही प्रकरणको प्रतिक्रिया स्वरूप अहिले ओलीलाई हटाउने गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड– माधव नेपाल समूहले राजीनामा मागेको छ । यता संसदको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी ओली सरकारको बिदा गनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ ।
नेकपाभित्रको घरझगडाले राजनीति तरंगित भइरहेका बेला देउवाको मौनतालाई समेत अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
यद्यपि प्रधानन्त्रीको राजीनामा बारेमा सभापति देउवा मौन रहनुलाई कतिपयले संसदमा रहेको काँग्रेसको संख्यात्मक उपस्थितिसँग पनि जोडेका छन् ।
सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता हैसियतमा काँग्रेस छैन । सांसदको संख्याको उपस्थितिभन्दा पनि प्रतिपक्षीको स्थानमा काँग्रेसलाई खोजिरहेको पाइन्छ ।
तर देउवाले भने यो मामलामा मौन देखिएको छन् । अध्यादेश प्रकरणमा (ब्याक फाइय) भएपछि रन्थनिएका प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासँग कुनै सम्झौता गरेको आशंकालाई यो मौनताले बल पुर्याएको छ ।
अध्यादेश फिर्तापछि ओलीले पहिलो भेट देउवाबाट सुरु गरेका थिए । पार्टीभित्रको विरोधका बीच देउवाले कयौँ पटक सरकारलाई साथ दिएका उदाहारण छन् । त्यसको पछिल्लो उदहारण अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन काँग्रेसले लिएको तथस्ट नीतिलाई हेरे पुग्छ । त्यति बेला सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगको पदाधिकारीमा सम्झौता गरिएको भनिएको थियो ।
उपसभामुखदेखि केही संवैधानिक निकायमा ओली र देउवाबीच कुनै सम्झौता भएको हुनसक्ने आंशका गरिन थालिएको छ । किनभने प्रधानमन्त्री ओलीसँग मधेशवादी दल चिढिएपछि उपसभामुख चिठ्ठा काँग्रेसको भागमा पर्नेदेखिएको छ ।
त्यसै ३९ वटा संवैधानिक नियुक्तका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले गृहकार्य गरिरहेकाले त्यहाँ पनि देउवालाई लोभ्याउने ठाउँ देखिन्छ । ओलीसँगै भेटका नेकपाकै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीको राजीनामा माग्नु कस्सिएका बेला देउवा मौन देखिएका छन् ।
अर्कोतिर अध्यादेशको अभिष्ट पूरा हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली प्रतिपक्षी फकाउने रणनीतिमा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
यस्तै देउवामा पनि ओलीलाई अहिलेकै अवस्थामा बिच्क्याउने मसाय देखिँदैनँ । देउवा पनि नेपाली राजनीतिका एक चलाख खेलाडी मानिन्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन सत्तारूढ दलभित्र चलिरहेको संघर्षका देउवाको मौनताले राजनीतिक अर्थ बोकेको कतियको बुझाइ छ ।